जनवरी २१ : विश्व इतिहासमा भएका प्रमूख घटना – Lokpati.com
सरकार मृत्यु पक्राउ केपी शर्मा ओली राशिफल नेकपा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड नेपाली काँग्रेस प्रधानमन्त्री अपराध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल प्रहरी चितवन प्रचण्ड अमेरिका
By लाेकपाटी न्यूज Last updated Jan 23, 2020
काठमाडौं। आज माघ ७ गते मंगलबार २०७६ अर्थात सन् २०२० को जनवरी २१ तारिक हो। आजको दिन नेपाल र विश्व इतिहासमा भएका घटनाक्रममध्ये केही महत्वपूर्ण घटनाक्रम जसले इतिहास रच्न सफल भएका छन्।
आजको दिन नेपालमा कृषि विकास बैंकको स्थापना भएको थियो। २०२४ सालको माघ ७ गते कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले यो बैंकको स्थापना गरिएको हो। कृषि विकासमा बढीभन्दा बढी गतिशीलता ल्याई सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित र सुविधा कायम गर्ने र कृषि क्षेत्रमा सुलभ र सरल पद्धति अपनाई पूँजी तथा ऋण उपलब्ध गराउनु कृषि विकास बैंकको स्थापनाको प्रमुख उद्देश्य रहेको उल्लेख छ।
सन्२०११ जनवरी २१ को दिन आज दक्षिण कोरियाली जलसेनाका लागि विशेष दिनको रुपमा रहेको छ। आजकै दिन सेनाले अपहरणमा परेका जहाजको समुहलाई बचाएर बहादुरीपूर्ण काम गरेको थियो। अरेवियन सागरमा समुन्द्रिक डाकुहरुले जहाज कब्जा गरेर अपहरण गरेका थिए।
रसायन बोकेर कोरिया जादै गर्दा अपहरणमा परेको यो जहाजबाट कोरियाली जलसेनाले अपहरणमा परेका जहाजको समूहलाई आजकै दिन बचाएको थियो। सन् २००८ मा आजको दिन विश्वभरीको सेयर बजारमा भारी गिरावट आएको थियो। आजकै दिन सन् २०१० मा टोयोटाले विक्रि गरेको सवारीमा समस्या देखिएपछि ५२ लाख सवारी साधनलाई सुधार गर्ने घोषणा गरेको थियो।
लोकसेवा तयारी गर्दा के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
के सेक्स र चुम्बनबाट कोरोना भाइरस सर्छ ?
कुरुक्षेत्रको युद्धबारे छ रोचक तथ्य
यहाँ ३३ दिनको एक वर्ष हुन्छ !
सेक्सबारे जान्नैपर्ने १८ नियम के-के हुन् ?